Nifarana ny fametrahana antontan-taratasy: mbola hisy hahintsan’ny HCC amin’ireo kandidà 46 | NewsMada
Nifarana ny fametrahana antontan-taratasy: mbola hisy hahintsan’ny HCC amin’ireo kandidà 46
Haka fanapahan-kevitra ny HCC. Tafakatra 46 ireo kandidà hirotsaka hofidina filoham-pirenena, taorian’ny fe-potoana farany fametrahana ny anton-taratasy tetsy Ambohidahy, omaly.
Manana dimy andro ireo mpitsara avo handinihana ny mombamomba ireo kandidà ka ahafantarana na afaka milatsaka na tsia, izy ireo.
Aorian’izany, havoakan’ny HCC, ny alahady 26 aogositra izao ny lisitra farany ho an’ireo kandidà mahafeno ny fepetra afahana mirotsaka. Anisan’ny mason-tsivana hijerena azy ireo ny fandoavan-ketra, ny anto-bola 50 tapitrisa Ar…
Tsy mbola fantatra ny ho laharan’ny kandidà anaty biletà tokana…
Etsy andaniny, tsy mbola fantatra ny ho laharan’ireo kandidà aorian’ny fivoahan’ny lisitra ofisialy. Mbola hisy ny fanendrena ny solontenan’ireo mpilatsaka hofidina ho mpikambana eo anivon’ny Ceni. Hirosoana avy eo ny an-tsapaka amin’ny ho laharan’ny kandidà hisoratra ao amin’ny bileta tokana sy amin’ny tabilao, hisy ny peta-drindrina ahitana ny sarin’ny kandidà sy ny mety ho vinany.
Ho raikitra kosa ny fampielezan-kevitra, ny 8 oktobra ho avy izao ary hifarana ny 6 novambra.
Hametra-pialana ny filoha Rajaonarimampianina
Ankoatra ireo, tsy maintsy hametra-pialana, ny 7 septambra izao, araka ny voalazan’ny lalàna ny filoha Rajaonarimampianina amin’ny maha kandidà ny tenany. Hisolo toerana azy vonjimaika kosa ny filohan’ny Antenimierandoholona, Rakotovao Rivo. Tahaka izany koa ny filohan’ny Antenimieram-pirenena, Rakotomamonjy Jean-Max. Miala amin’izany toerany izany eny Tsimbazaza ary soloin’ny filoha lefitra eny anivon’ity andrimpanjakana ity, aorian’ny fanambaran’ny eny Ambohidahy fa kandidà ofisialy ny tenany.
Araka izany, miandry ny lisitra ofisialy havoakan’ny HCC izany ireo kandidà sy ny mpanohana azy ary koa ny ho lalaharan’ny mpirotsaka hofidina anaty bileta tokana.